Taakulada Soomaalida - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Ayada oo si joogta ah uga dhex shaqaynaysay bariga iyo bartamaha Soomaaliya MSF ayaa wali ah fidiyaha ugu way nee daryeel caafimaad oo lacag laáan ah waxayna mashruucya mudo dheer soo jiray ku leedahay gobollada Banaadir, Bay, Hiiraan, Galgaduud,Jubadda Hoose, Shabeelaha Dhexe, Shabeelaha Hoose iyo Mudug.Wax-qabadka MSF ee Barigga iyo Bartamaha Soomaaliya ee 2009
Sanadkii 2010 MSF waxay sahaqo ka bilowday Gobolka Maroodijeex ee Somaliland. Kooxda MSF waxay ka as’aasayaan Mashrruc Kale gobolka Sanaag ee Somaaliland. Wadanka Itoobiya MSF waxay gobolka ay Soomaalidu degto ay ku caawisaa qoxooti ka soo qaxay Soomaaliya iyo dada jinsiyadoodu Somali tahay oo Itoobiya u dhashay. MSF waxaa kale oo ay dareey caafimaad oogu fidisaa Somaalida qoxottiga iyo magan galyo doonka ku ah wadamada Jabuuti , Masar , Kenya , Malta iyo wixii ka horeeyay mudo dhow wadanka Yemen.
Mashruucyada MSF ee Somalia
Gobolka Bay,Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
Magaalada Diinsoor waxa ay MSF ku leedahay xarun caafimaad oo 65 sariirood qaadda oo bixisa daryeel bukaan-jiif iyo mid bukaan-socodba. Waaxda bukaan-jiifka (IPD), oo u adeegta dhammaan dadweynaha degmada oo lagu qiyaasey 110,000 oo qof.
Bogga mashruuca Baay
Waxii ka horeeyay dhamaadkii bishii June ,waqtigaas oo ay MSF xirtay Mashruucii Bakool, heyaáda waxay maa-mulaysay xarun caafimaad oo ka kooban 293 sariirood oo ku taala caasimada gobolka ee Xudur, Xaruntan ayaa u khidmaynaysay bulsho kudhow 250,000. Bogga mashruuca Bakool
Waqooyiga Muqdisho waxa MSF ay mid ka mid ah tas-hiilaadka caafimaadka ee dadweynaha ay ku lahayd degaanka Yaaqshiid laga soo bilaabo 1994tii.Mashruuca MSF ee cusbitaalka Dayniile waxa uu daryeel iyo qalliin degdeg ah oo nafaha lagu badbaadinayo siinayey dadkii ku dhaawacmey dagaalladii ka socdey Muqdisho. Mashruuca Banaadir
Cusbitaalka Istarlin ee qaada 80ka sariirood ee ku yaalla Guriceel, ayaa MSF ay ku bixisaa adeegyo bukaan-socod iyo kuwo bukaan-jiif oo ay ka mid yihiin waaxda carruurta; waaxda haweenka; waaxda daryeelka hooyada iyo dhalmada; qol qalliin iyo waaxda qalliinka; shaybaar iyo tas-hiilaadka raajada.
Bogga Mashruuca Galgaduuda
MSF waxa ay maamushaa cusbitaalka gobolka ee 99 sariirood qaada ee ku yaalla magaalada Baladweyne kaas oo daryeel caafimaad oo sarreeya oo lacag la’aan ah siiya 280,000 ee deggan gobolka. MSF waxa ay bixisaa qalliin degdeg ah; daryeelka dhaawaca, daryeel caafimaadka dadka waaweyn, daryeelka carruurta, daaweynta nafaqo-xumada ba’an waxaana ay diyaar u tahay in ay wax ka qabato xaaladaha caafimaad ee degdegga ah ee ku soo kordha gobolka.
Bogga Mashruuca Hiiraan
MSF waxa ay daryeel caafimaad oo aasaasi ah, mid sare iyo mid degdeg ahba ka bixisaa magaalooyinka Mareerey iyo Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Mashruuca jubadda Hoose
Hargeysa, ayaa MSF waxa ay daryeel caafimaad iyo mid nafaqeyn oo lacag la’aan ah siisaa dadka sida gaarka ah u nugul, iyada oo diiradda saareysa carruurta ka yar shan sano jirka. Bukaannada waxaa ka mid ah dad barokacay, qaxooti, muhaajiriinta dhaqaale-doonka ah iyo kuwa guud ahaan la fogeeyo; kuwaas oo badidoodu ay haystaan xaalado nololeed oo adag iyada oo aan si ku filan u heli karin biyo nadiif ah, cunto, caafimaad iyo fayadhowr, fursado nolol-raadsi iyo hoy.
Link to Maroodi jeex
Gobolka Mudug ayaa MSF ay ka shaqeysaa Koonfurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo labadaba. Cusbitaalka Koonfurta Gaalkacyo waxa ay ku bixisaa adeegyo bukaan-socod oo daaweyn iyo ka-hortag isugu jira; daryeelka hooyooyinka, oo ay uu ka mid yahay daryeelka degdegga ah ee uurreyda iyo umulaha; quudin ku daweyn; daaweynta qaaxada iyo qalliin. Bogga Mashruuca Mudug
Gobolka Sanaag, Somaaliland
MSF ayaa ku hawlan sameynta “Mashruuc Qalliinka Degdegga ah iyo Daryeelka Caafimaadka Hooyada iyo Umusha oo ay ka fulineyso cusbitaalka Ceerigaabo, gobolka Sanaag. Degaankan fog dadkiisuna ay reer miyiga yihiin ayaa si yar u heli kara daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah, iyada oo abaarta soo noqnoqota, saboolnimada iyo nabadgelyo-xumadu ay xaaladaha nolosha ka dhigayaan kuwo adag.
Booqo bogga Mashruuca MSF ee Gobolka Sanaag ee Somaliland
MSF waxa ay daryeel caafimaad oo aasaasi ay ku bixisaa shabakad ka kooban afar xarumo caafimaad ah oo ku yaalla degmooyinka Jowhar, Mahaddaay iyo Balcad. Xarumaha caafimaadku waxa ay bixiyaan adeegyo bukaan-socod oo ka hortag iyo caafimaadba; daryeelka hooyada iyo carruurta. Bogga Mashruuca Shabeelaha Dhexe
Degaanka Xaawo Cabdi, ayaa MSF waxa ay ku maamushaa waax bukaan-socod, waax bukaan-jiifka carruurta ah, iyo xarun daweynta daacuunka iyo shubanka, barnaamij nafaqeyn, biyo-dhaamin iyo qaybinta bustayaal iyo agab kale oo aan cunto ahayn. Afgooye ayaa MSF waxa ay taageertaa waxqabayada cusbitaalka. Mashruuca Shabeelaha Hoose
Jabuuti, Magaalda Jabuuti
MSF ayaa Jabuuti ka shaqeyneysay tan iyo 2008dii. Kooxaha caafimaadka ayaa carruur ay hayso nafaqo-xumo ba’an ku daryeela Balbala oo ku taalla magaalada Jabuuti dibaddeeda, halkaa oo 200,000 qof ay ku nool yihiin, kuwaas oo ay ka mid yihiin tiro badan oo ah dad u dhashey dalalka deriska la ah sida Soomaaliya iyo Itoobiya. Booqo bogga mashruuca MSF ee magaalda Jabuuti
MSF ayaa dhowaan xarun caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka ah ka furtey Ezbet El Haggana, oo ah isku-raran magaalo oo ku taalla Bariga Qaahirada Weyn. Adeegyada lagu bixiyo waxaa ka mid ah daryeelka ka horreeya uurka iyo kan ka dambeeya uurka iyo sidoo kale la-talinta/daaweynta carruurta ka yar shan sano jirka. Booqo Mashruuca MSF ee Qahira, Masar
Kenya, soohinta ay la leedahay Soomaaliya, ayaa waxa ku nool kumanaan qaxooti Soomaaliyeed ah. Badi qoxootiga waxay ku nool yihiin saddexda xero ee ku yaalla hareeraha magaalada Dhadhaab, ee waqooyiga-bari ee Kenya. Xerooyinka saddexda ah oo markii hore loo dhisey in ay ku noolaadaan 90,000 oo qof, ayaa waxaa hadda ku jira ku dhowaad 300,000 oo qaxooti ah. In kasta oo xuduudda la xirey 2007dii, haddana.
Akhri akhbaarta ku saabsan mashruuca MSF ee Dadaab, Kenya
Itoobiya , gobolka Soomaalida
Gobolka Soomaalida ee Itoobiya, ayaa MSF waxa ay ku gargaartaa qaxootiga Soomaaliya ka yimid iyo sidoo kale Soomaalida Itoobiya.
Booqo bogga Mashruucyada MSF ee Gobolka ay Soomaalidu degto ee Itoobiya
Sanad kasta boqolaal muhaajiriin iyo magangelyo-doon ah, oo u badan Soomaali, ayaa ku soo dega Malta. Badidoodu waxaa la geeyaa xarumo lagu hayo halkaas oo lagu hayn karo ilaa 18 bilood. Bishii Agoosto 2008da, ayaa MSF ay bilowdey in ay daryeel caafimaad ku bixiso saddex xarumood oo kuwa dadka lagu hayo ah oo ku yaalla Malta. Akhri warar ku saabsan qoxootiga Soomaaliyeed ee Yemen
Malta, Hal far-Valeeta
Sanad kasta boqolaal muhaajiriin iyo magangelyo-doon ah, oo u badan Soomaali, ayaa ku soo dega Malta. Badidoodu waxaa la geeyaa xarumo lagu hayo halkaas oo lagu hayn karo ilaa 18 bilood. Bishii Agoosto 2008da, ayaa MSF ay bilowdey in ay daryeel caafimaad ku bixiso saddex xarumood oo kuwa dadka lagu hayo ah oo ku yaalla Malta. Booqo bogga Jaziirada Malta